JINGHPAW KASA: ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်
နိုဝင်ဘာ (၂၇) အင်္ဂါ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် တပ်ရင်း (၃) နယ်မြေဖြစ်သော ဆဒုံးကျေးရွာ ဆေးရုံကုန်းတွင် တပ်စွဲထားသော ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် ခလရ (၁၀) မှ နိုင်ဝင်ဘာလ (၂၆) ရက် မနက် (၁၀း၀၀) နာရီခန့်မှာ ညနေပိုင်း (၃း၀၀) နာရီအချိန်အထိ ကုန်ပေါင်ဘွမ် ဘက်သို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်၏ လက်နက်ာကြီးများ တစ်နေကုန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဆေးရုံဝန်ထမ်းများအားလုံး ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင် သွားခဲ့ရကြောင်း၊ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် ယခုကဲ့သို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီး စစ်အင်းအားများ ထိုးတက်လာလျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များလည်း အသင့် အနေအထားဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြောင်း ရှေ့တန်းသတင်းများမှ သိရှိရပါသည်။
Burmese soldiers fired with heavy artillery weapon to Kung Pau Mountain, which is in KIA (3) battalion under KIA (5th) Brigade area, on 26th November according to the KIA front line officer report. From morning until 03:00 PM on that day, Burmese infantry unit (10), which is based in Sadung hospital hill, fired heavy artillery weapon to Kung Pau Mountain, from that event all the hospital staff ran away from the hospital and Burmese army always uses such kind of method like firing with heavy artillery and take military forces to the front line area. Kachin patriotic soldiers also made alert and prepare for prevent them.